Legende Pauillac 2015 ~ ICT.com.mm
HomeLegende Pauillac 2015
Légende Pauillac Cabernet Sauvignon, Merlot Cabernet Franc Alcohol: 12.5% Dry/ 2015 Pauillac/ France Tasting Notes Deep crimson hue, aromatic and elegant with fresh fruit notes (redcurrant and blackberry), toasted and spicy notes.... [Learn more]
Brand: LegendeFilter by: Fine Wine Myanmar, Wine
Cabernet Sauvignon, Merlot Cabernet Franc
Deep crimson hue, aromatic and elegant with fresh fruit notes (redcurrant and blackberry), toasted and spicy notes. Fine and silky tannins with excellent fresh finish.
Enjoy perfectly with foie gras, roasted or grilled meat such as lamb or beef on strong flavor sauces. The wine will also go well with blue cheese or some mild and hard cheese.
ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Legende Pauillac (2015) ဝိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နာမည်အကျော်ကြားဆုံးနဲ့ ဈေးအကြီးဆုံးဝိုင်နီအချို့ ထွက်ရှိတဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ Pauillac ဒေသကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နာမည်အကျော်ကြားဆုံး ဝိုင်နီစပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Cabernet Sauvignon စပျစ်ကို အဓိကအသုံးပြုထားပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့မူလစပျစ်နီမျိုးဖြစ်တဲ့ Merlot စပျစ်နဲ့ အနက်ရောင်အခွံရှိ Cabernet Franc ပြင်သစ်ဝိုင်စပျစ်မျိုးတို့ကိုလည်း ရောစပ်ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှု (၁၂.၅) ရာခိုင်နှုန်း ရှိတဲ့ Dry/ 2015 ဝိုင်နီ(Savory & Classic) အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဲ/ငန်း အသည်းဟင်းလျာ၊ အနံ့အရသာထူးကဲတဲ့ဆော့စ်တွေနဲ့ တွဲဖက်စားသုံးရတဲ့ သိုးကလေးကင်၊ အမဲသားကင်၊ အသားကြပ်တင် ဟင်းလျာတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ပြင်သစ် ဝိုင်နီ ဖြစ်ပါတယ်။ Blue ချိစ်၊ နူးညံ့တဲ့ချိစ်နဲ့ ချိစ်အမာတို့ဖြင့်လည်း တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
A major appellation in the Médoc, Pauillac benefits from an exceptional terroir characterized by gravelly hilltops onaclay subsoil which ensures natural drainage and encourages the vines to develop deep roots: these are the perfect conditions for Cabernet Sauvignon. Légende R Pauillac is made from grapes grown in Domaines Barons de Rothschild (Lafite)’s own vineyards and, once again, the wines are made with the same attention to detail as for the Grand Vin. Produced from the properties’ younger vines, these are classic , good quality wines. Their structure is less concentrated than their prestigious elders, allowing them to age more quickly, and after justafew months in the bottle, they offer an original, unique style, with the fullness and complexity for which the appellation is renowned.